Uhlobo luni lomfana olungathandi ukudlala ezindizeni? Futhi kungcono nakakhulu uma abazali bengagxili nje emdlalweni, kodwa futhi basize ingane yenza ithoyizi ngokwayo. Kulokhu udinga ukubekezela okuncane, izinto ezilula futhi cishe isigamu sehora lesikhathi samahhala. Ngakho, kanjani ukwenza iphepha fighter?
Kuyothatha ukuthini ukusebenza
Lapha konke kuxhomeke kulokho ubuchwepheshe i- aircraft izokwenzeka . Uma lo fighter ovela ephepheni engumnikazi wezindlela zasendulo yobuciko baseJapane be-origami, khona-ke kuyadingeka iphepha elilodwa lephepha le- A4, elimhlophe noma elimibala. Ungasebenzisa futhi amapensela noma amamaki wokubala. Uma ufuna ukwenza ithoyizi ngesakhiwo, kuzomele uqale ukuyidweba eshadini, futhi uthathe isisi kanye ne-glue.
Indiza yase-Origami: ekuqaleni
Thatha ishidi lephepha le-A4 bese umelela phezulu endaweni ephezu komhlaba. Okokuqala, kuzodingeka iphotshwe ngesigamu ukuze imephu emgqeni wokugoba phakathi. Manje ungayiphinda. Isigaba esilandelayo: izingxenyana ezingenhla zengezwe esikhungweni, iphuzu litholakala. Ama-angles lateral kudingeka aphonswe futhi (ngendlela, indiza ejwayelekile yenziwa ngendlela efanayo). Indlela yokwenza i-fighter ephepheni? Kuzodingeka ngiguqule iphuzu elingenhla kimi, phansi. Kulesi simo, kufanele kube ngamasentimitha amane ngezansi komkhawulo ohlukile weshidi.
I-origami yezindiza: umsebenzi oqhubekayo
Ngemuva kokwenza konke okushiwo ngenhla, kufanele uguqule phansi imodeli elandelayo, bese ugoba phakathi kwekhasi zombili izingxenyeni ezingaphezulu, okungukuthi, phinda konke okwenziwe ekuqaleni. Manje ishidi liphinde linyuka, futhi ikhonji elingezansi ligoqa kuze kufike emajuba asevele egobile esigabeni esandulele somhlangano. Ihlala kuphela kusukela ohlangothini lwesobunxele kuya kwesokudla ukuwehlisa imodeli elandelayo ngesigamu, okungukuthi, emzimbeni wezindiza ezayo. Uma ingaphenduli kalula, kusho ukuthi ibambe ngokungalungile, ohlangothini olungalungile.
Indiza yase-Origami: ukuqedwa komsebenzi
Indlela yokwenza i-fighter ephepheni? Yengeza kuphela izinto ezincane kuphela. Kusele ukwenza amaphiko. Ngenxa yalokhu, amahlombe aphansi athathwe futhi amamentimitha amathathu ephepheni aphendukile kuwo ngendlela ehlukile. Lokhu kuzoba ngamaphiko. Kumele kube yi-perpendicular to the body. Konke, okwamanje kuphela ubuhle bezingalo zamaphiko ezigobile, okuthiwa zizinzile-origami. Kusuka ephepheni, indiza ye-fighter ilula kakhulu futhi ishesha ngokwanele. Ungaphinde uthathe amapensela ombala noma upende, udwebe amamaki okuhlonza, ukubhaliswa noma upende umodeli ngemibala evikelayo.
Futhi ungayenza kanjani isiphepheli ephepheni uma ufuna ukusebenzisa inqubo ehlukile? Ngempela, i-origami - ubuciko obumangalisayo, kodwa ngosizo lwayo ungakha isethi esinqunyiwe sezindiza, futhi zonke, ngokubanzi, zizofana. Futhi uma kukhona isifiso sokwenza into enzima kakhulu, ekhanyayo, enkulu futhi efana nezimoto zangempela zokulwa? Kulesi simo, ungasebenzisa umhlangano we-class of paper models. Lapha udinga: iphepha elilula, elimibala, izikhali, iglue, amakhadibhodi ngesisekelo. Ukwenza lokhu, ukuhlelwa kwedivayisi yesikhathi esizayo kukhishwa ephepheni, kukhishwe ngokucophelela. Ungakhohlwa mayelana nezindawo zamafolda namajoyina wezingxenye. Ukunemba nokuchithwa kulokhu kusebenza njengesiqinisekiso sobuhle besimodeli esizayo. Uma konke kuqedwe, kuhlala nje ukuhlanganisa izingxenye ngayinye, ushiye indiza ukuba yomile. Isiteji sokugcina sibala futhi sinikeza indiza ibe yedwa. Kungaba yimbala yemibala yepende kanye nezinkanyezi zaseSoviet emaphikweni noma imininingwane ejwayelekile yama-American fighters. Lapha konke kuncike ekucabangeni kwalowo othe wanquma ukudala indiza ephepheni.
Indlela yokwenza isitashi indwangu? Indlela eqinisekisiwe
I-Dandelion kusuka ephepheni isinyathelo ngesinyathelo: isithombe, isigaba somsebenzi
Ski resort waseSerbia. Izibuyekezo